Hayadda FAO oo cambaaraysay dil magaalada Marka loogu geystay mid ka mid ah shaqaalaheeda
Warsaxafadeed ay ka soo saartay Heyadda cunada iyo beeraha Q.M ee FAO xafiiskeda magaaladda Nairobi ayaa ayaa lagu sheegay in mid ka mid ah shaqaalaheeda lagu dilay magaalada Marka ee xarunta gobolka Sh/hoose ka hor inta aysan magaaladaasi gaarin ciidamada dawlada iyo kuwa AMISOM.
Agaasimaha hayadda FAO FAO José Graziano da Silva ayaa sheegay inay aaminsanyihiin in dagaalyahanada Al-Shabab ay magaalada Merka mid ka mid ah shaqaalahooda oo lagumagacaabi jiray Yaasiin Maxed Xasan oo 32 sanno jir ahaa.
Hayadda FAO ewaxay war saxaafadeedkeeda ku sheegtay inay ka naxsatahay dilka loo geystay ruuxaasi waxaana ay intaa ku dartay inay murugada la wadaagayaan ehelada uu marxuumkaasi ka geeriyooday.
Xogta aynu heyno waxay sheegaysaa in marxuumkaan ay dileen dagaalyahanada Al-Shabab dabcan gar daaro ayay ku maageen ayuu yiri José Graziano da Silva oo ah agaasimaha guud ee hayadda Q,M u qaabilsan arrimaha cunnadda iyo beeraha ee FAO.
Hayadda FAO ayaa gobolkaasi Sh/hoose ka hawl galaysay 4 sanno ee la soo dhaafay waxaana hawsha ugu badan ee ay qabtaan ay tahay inay beeralayda siiyaan dalagyo ay beertaan